တီယာနီ ၊ ဒေးဗဈ လူးဝဈဇျ၊ ဘယျလာရငျတို့ကို လကျလှတျရမယျ့ အာတီတာ ဟာကီမီကို ဝယျယူမလား ? – Sports A2Z
တီယာနီ ၊ ဒေးဗဈ လူးဝဈဇျ၊ ဘယျလာရငျတို့ကို လကျလှတျရမယျ့ အာတီတာ ဟာကီမီကို ဝယျယူမလား ?
အာဆငျနယျနညျးပွ အာတီတာဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလျနဲ့ပှဲစဉျမှာ တီယာနီကို ဒူးဒဏျရာကွောငျ့ လူစားလဲခဲ့ရတဲ့အပွငျ အနညျးဆုံးတလကနေ ဒီရာသီကုနျအထိ အနားယူရဖှယျ ရှိနသေလို သူဟာ အာဆငျနယျမှာ ဒဏျရာပွဿနာနဲ့ ရုနျးကနျနရေပွီးမှ အခုလို ခွစှေမျးပွနခြေိနျမှာ ဒါက အာတီတာအတှကျ ထိုးနှကျခကျြဖွဈလာတယျ။
ဒါ့အပွငျ နောကျလေးပတျတိတိ လှဲခြျောဦးမယျ့ ဒေးဗဈ လူးဝဈဇျ၊ နဲ့ ရာသီကုနျမှာ အသငျးကနေ ထှကျခှာခှငျ့ပွုဖို့ စီစဉျထားတဲ့ ဘယျလာရငျတို့ဟာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ဒဏျရာပွဿနာနဲ့ လူစာရငျးအငျအားကို ပွသနတောဖွဈပွီး လူသဈဝယျယူဖို့ တောငျးဆိုလာစတေယျ။
အာတီတာအနနေဲ့ လာမယျ့aနှရောသီဈေးကှကျမှာ ညာနောကျခံအစှနျလူနရောကို ဖွညျ့တငျးမယျလို့ သိရှိထားရပွီး သူ့ရဲ့ပဈမှတျက အငျတာမီလနျကစားသမား အကျရျှရကျဖျ ဟာကီမီပါ။ အငျတာမီလနျအသငျးကလညျး အသကျ ၂၂ နှဈသားကို ယူရိုသနျး ၅၀ နဲ့ ရောငျးခသြှားမယျလို့ ပွငျဆငျနတောကိုလညျး တှရေ့တယျ။
အာဆငျနယျအနနေဲ့ ရာသီအကုနျမှာ မျောရိုကိုသားကို အခိုငျအမာကမျးလှမျးသှားဖို့ ရှိနပွေီး ဒါက အသငျးရဲ့ ဆန်ဒလညျးဖွဈနကွေောငျး အာတီတာကိုယျတိုငျက လူသဈဝယျယူမယျ့ အစီအစဉျကို ပွီးခဲ့တဲ့လက အတညျပွုခဲ့ပွီးတာပါ။
” ကြှနျတျောတို့ နှရောသီအတှကျ အရာရာပွငျဆငျနပေါတယျ။ ဘုတျအဖှဲ့၊ အမှုဆောငျခြုပျ၊ အသငျးဒါရိုကျတာနဲ့ ပိုငျရှငျတှေ ကိုယျတိုငျကလညျး ဒါကိုလိုလားနကွေပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘယျလိုကစားသမားသဈကို ချေါယူမလဲဆိုတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွုလုပျပွီးဖွဈတယျ ”
” အသငျးအတှကျ လုပျစရာတှေ အမွောကျအမွား ရှိနှငျ့နပေါတယျ။ လိုရငျးနဲ့ ဦးစားပေးပဈမှတျကို ဖွဈအောငျ ချေါယူမယျ။ ကြှနျတျောတို့အသငျး တညျငွိမျမှုရှိရမယျ။ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျတဲ့ လူစာရငျး၊ ရရှေညျစှဲမွဲပွီး ခွစှေမျးပွနမေယျ့ လူစာရငျးကို လိုအပျပါတယျ။ ” လို့ အာတီတာက အသငျးရဲ့ အပွောငျးအရှနေဲ့ပတျသကျပွီး ကွိုတငျစီစဉျထားရှိမှုတှကေို အရိပျအမွှကျ အသိပေးသှားခဲ့ပါတယျ။
အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ တီယာနီကို ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် လူစားလဲခဲ့ရတဲ့အပြင် အနည်းဆုံးတလကနေ ဒီရာသီကုန်အထိ အနားယူရဖွယ် ရှိနေသလို သူဟာ အာဆင်နယ်မှာ ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ ရုန်းကန်နေရပြီးမှ အခုလို ခြေစွမ်းပြနေချိန်မှာ ဒါက အာတီတာအတွက် ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာတယ်။
ဒါ့အပြင် နောက်လေးပတ်တိတိ လွဲချော်ဦးမယ့် ဒေးဗစ် လူးဝစ်ဇ်၊ နဲ့ ရာသီကုန်မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဘယ်လာရင်တို့ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ လူစာရင်းအင်အားကို ပြသနေတာဖြစ်ပြီး လူသစ်ဝယ်ယူဖို့ တောင်းဆိုလာစေတယ်။
အာတီတာအနေနဲ့ လာမယ့်aနွရောသီဈေးကွက်မှာ ညာနောက်ခံအစွန်လူနေရာကို ဖြည့်တင်းမယ်လို့ သိရှိထားရပြီး သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်က အင်တာမီလန်ကစားသမား အက်ရ်ှရက်ဖ် ဟာကီမီပါ။ အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း အသက် ၂၂ နှစ်သားကို ယူရိုသန်း ၅၀ နဲ့ ရောင်းချသွားမယ်လို့ ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။
အာဆင်နယ်အနေနဲ့ ရာသီအကုန်မှာ မော်ရိုကိုသားကို အခိုင်အမာကမ်းလှမ်းသွားဖို့ ရှိနေပြီး ဒါက အသင်းရဲ့ ဆန္ဒလည်းဖြစ်နေကြောင်း အာတီတာကိုယ်တိုင်က လူသစ်ဝယ်ယူမယ့် အစီအစဉ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လက အတည်ပြုခဲ့ပြီးတာပါ။
” ကျွန်တော်တို့ နွေရာသီအတွက် အရာရာပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဘုတ်အဖွဲ့၊ အမှုဆောင်ချုပ်၊ အသင်းဒါရိုက်တာနဲ့ ပိုင်ရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒါကိုလိုလားနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုကစားသမားသစ်ကို ခေါ်ယူမလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တယ် ”
” အသင်းအတွက် လုပ်စရာတွေ အမြောက်အမြား ရှိနှင့်နေပါတယ်။ လိုရင်းနဲ့ ဦးစားပေးပစ်မှတ်ကို ဖြစ်အောင် ခေါ်ယူမယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်း တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ လူစာရင်း၊ ရေရှည်စွဲမြဲပြီး ခြေစွမ်းပြနေမယ့် လူစာရင်းကို လိုအပ်ပါတယ်။ ” လို့ အာတီတာက အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်စီစဉ်ထားရှိမှုတွေကို အရိပ်အမြွက် အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
မကျဆီ၊ ရျောနယျလျဒို မပါဝငျတော့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဘလှနျးဒီအောဆုနဲ့ ထိုကျတနျကွောငျး နမောသကျသပွေနိုငျမလား?
အာဆငျဝငျဂါးရဲ့ဟောကိနျးက ပေါ့ဘာနဲ့မှ သှေးထှကျအောငျ မှနျကနျခဲ့ပွီလား ?
ဥရောပမှာ အောငျမွငျခငျြရငျ ဥာဏျပိုကောငျးရမယျလို့...